नगद Stax | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! नगद Stax | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
नगद Stax यसलाई खेल्न सरल छ रूपमा खेलाडीहरू रूपमा मनोरंजक छ जुन एउटा अति सरल खेल छ. को गेमप्लेको पनि एक वैकल्पिक अतिरिक्त सुविधा ट्रिगरिङ द्वारा थप परिष्कृत गर्न सकिन्छ कि कुनै पनि extravagant सुविधाहरू बिना धेरै सरल छ. खेल खेले र मा आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ फल क्यासिनो साइट.
अन्तर्राष्ट्रिय लटरी मा एक प्रमुख निर्माता र विकासकर्ता र लाइसेन्स गेमिङ उद्योग, वैज्ञानिक खेल, धेरै उच्च गुणवत्ता अनलाइन क्यासिनो खेल विकास भएको छ. यो खेल कम्पनी र मा खेल्न उपलब्ध विकास छ फल क्यासिनो साइट.
खेलको गेमप्लेको राम्रो uncomplicated छ र समावेश5संग रील 10 सुरुमा paylines. खेल स्क्रिन एकदम सरल छ तर रील स्पिन गर्न सुरु गर्दा गेमप्लेको रोमाञ्चक हुन्छ. यो लागि दायरा फल क्यासिनो साइट खेल छ 0.10 गर्न 400 प्रति स्पिन क्रेडिट. जब शर्त छ2क्रेडिट, 20 paylines त्यतिबेला सक्रिय बन्न. को रील मात्र ठूलो एक्स संकेतहरू छन्, यस आधारभूत प्रतीक रूपमा पट्टी प्रतीक र सेभेन्स फल क्यासिनो साइट खेल.
यो अन्य सुविधाहरू फल क्यासिनो साइट स्लट छन्:
जंगली- को जोकर थप विजेता संभावना सिर्जना गर्न सुनको सर्कल बोनस प्रतीक बाहेक अन्य सबै प्रतीक लागि विकल्प जो यो खेल को जंगली प्रतीक हो.
ठूलो बेट खेल- यो तपाईं द्वारा अंधाधुंध ट्रिगर गर्न सकिन्छ कि एक वैकल्पिक सुविधा छ. यो सुविधा मा खेलाडीहरू पाँच spins छ कि 30 जो मा paylines तपाईं भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. यो एकदम आफ्नो विजेता संभावना सुधार. यो बोनस सुविधा बेला फ्री Spins सुविधा सक्रिय एक सम्भावना पनि छ.
फ्री Spins- एउटै स्पिन समयमा सबै पाँच रील मा सुनको सर्कल बोनस प्रतीक अवतरण यो सुविधा ट्रिगर. त्यहाँ रील प्रत्येक माथि खाली स्लट छन्. हरेक समय तपाईं एक स्क्याटर भूमि, कि रील माथि खाली स्लट छरिन्छ को नै नम्बर प्राप्त. तपाईंले ती सबै स्लट मा छ छरिन्छ संख्या तपाईं प्राप्त मुक्त spins संख्या निर्धारण गर्नेछ. जब सुविधा प्ले भइरहेको छ कुनै पनि अतिरिक्त स्क्याटर प्रतीक रील मा उतरने मा तपाईं अतिरिक्त निःशुल्क स्पिन प्रदान गर्नेछ. छरिन्छ एक निश्चित संख्या पनि एक पाँच पटक गुणक हुन सक्छ.
नगद Stax सजिलो नियम संग आराम गर्दै छन् जो गम्भीर खेलाडीहरू लागि पूर्ण छ, केही बोनस राउंड्स र सरल गेमप्लेको तर ठूलो विजेता संभावित छ कि एक खेल चाहनुहुन्छ.